Lamaody – Tsy mifidy fitafiana loatra ny vakana vita amin’ny akora malagasy - AO RAHA Gazety Malagasy Online	Ny gazety Ao RahaTahiry
Lamaody – Tsy mifidy fitafiana loatra ny vakana vita amin’ny akora malagasy
Tsotra nefa mihaja. Lamaodin’ny tanora amin’izao fotoana ny karazana vakana vita avy amin’ny akora malagasy, izay isan’ny ankafizin’i Princio, raha ny hita amin’ny fomba fiakanjony.
Manodidina ny Ar 10 000 ka hatramin’ny Ar 15 000 ary mety hihoatra izany aza ny vidin’ny vakana iray, araka ny akora nanamboarana azy sy ny habeny ary ny endriny.
«Lafo ny masonkarena eo amin’ny vidin’ny akora, ka izay no somary maha lafo kely ny vidiny», hoy Ramavoarisoa Georgette, mpivarotra vakana, etsy amin’ny tsenan’i Pochard. Ny hazo, ny taolana, ny voamboana, ny andramena, ny tandrok’omby, ny akorandriaka, ny voanio… dia samy akora azo anamboarana vakana avokoa.
«Tsy manavaka fa natao ho an’ny lehilahy sy ny vehivavy ny vakana vita amin’ny akora malagasy», hoy ihany koa Andriam­bololonirina Hanitra, mpivarotra iray hafa. «Mahasarika olona maro ihany koa izy, noho izy tsy mba dia mifidy akanjo ampiarahana aminy loatra», raha ny fanamarihan’ireo mpivarotra ihany. Tsy vitsy ny andriambavilanitra mitondra azy hoentina amina lanonana mianjaika. Maro ihany koa anefa ny mividy azy hatao fitondra andavanandro fotsiny. Ao ihany koa ireo mitondra azy rehefa manao fitafiana somary gasigasy, amoahana ny maha malagasy. Endrika azo amoahana tsara azy ny lamaodiny ihany koa ny fampiarahana azy amin’ny vangovango, mitovy amin’ny akora nanamboarana azy. Ireo vakana vita amin’ny voamboana sy ny taolana no tena lafo indrindra amin’ireo.
Lehilahy handeha hijery baolina maty tany anaty honahona(0)
MPONINA ENY AMIN’NY FOKONTANY AMBOHIDAHY-ANKADINDRAMAMY RANDRIAMANANJARA HERITSOA ANTSOINA HOE TSOA, RAIM-PIANAKAVIANA 44 TAONA, HITA FATY TAO ANATY HONAHONA, TENY ANKORONDRANO -ANDRANOMAHERY, NY ALAKAMISY 16 MEY LASA TEO. TSY NODY AN-TRANO NANOMBOKA NY ALAHADY TALOHAN’IO ITY RAIM-PIANAKAVIANA ITY. EFA NIALANA NENINA TAMIN’NY FILAZANA AMIN’NY ONJAM-PEO SAO VERY NA NARARY TAMPOKA TANY AN-DALANA KA TSY TAFODY. NOTETEZINA
Lamaody, Mpanoratra Rijakely, 28.07.2012, 08:58	FIARAHAMONINA